Happy New Year 2012 အတွက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလက်ဆောင်များ နှင့် အင်တာဗျူး အစီအစဉ် ~ မျိုးကို
06:32 Interview, Photo No comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ ခင်ဂျာ။ ဒီနေ့ ညလေးဆို 2012 ကို ပြောင်းတော့ မယ်နော် .... နှစ်သစ် အကြောင်းအရာ လေးတွေကို အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ဘလော့ကာများနဲ့ စာဖတ်သူများ ကို တွေ့ဆုံ အင်တာဗျူးလေး မေးမြန်းထားပါတယ်။
အခုဆို 2012 ဆိုတဲ့ နှစ်သစ်ကူး အချိန်လေးကို ရောက်တော့မယ်နော် .... နှစ်သစ်ကူးပြောင်းတဲ့ အချိန်လေးကို နှစ်သစ်အတွက် အမှတ်တရ တစ်ခုခု ပြီးတော့ နှစ်သစ်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ပြောချင်တဲ့ စကားလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရအောင် ....
JUNEMOE - http://june-moe.blogspot.com
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ဆိုတာ နက်ဖြန်။ နက်ဖြန်တို ၂၀၁၁ ကုန်ပြီပေါ့- ၂၀၁၂ ဆိုတာကို နှစ်သစ်လို့ အမည် တပ်ကြတယ်နော် ဘာလို့နှစ်သစ်လို့တပ်တာလဲ ဆိုတော့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစမို့ နှစ်သစ်လို့ ခေါ်ကြတယ် နှစ်သစ်ကို အမျိုးမျိုးကြိုဆိုကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပဲ နှစ်တိုင်းကြိုပါတယ်။ သူများတကာ လိုလည်း လျှောက်မသောက်ပါ - လျှောက်လည်းမသွားပါ။ လမ်းတကာလှည့်ပြီးလည်း မအော်ပါ။ ၈ နာရီခွဲလောက်ဆို နှိုးစက်နဲ့ အိပ်ပြီး ၁၁ ခွဲဆိုထတယ်။ ၁၂ ထိ ထိုင်စောင့်တယ်။ ၁၂ ထိုးပြီး တစ်မိနစ်စွန်းတာနဲ့ တိုးတိုးလေး အိပ်ရာထဲကနေ Happy New Year. May you all be happy and healthy! လို့ အော်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ခဏတာ တရားထိုင်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ နှစ်သစ်ကိုကြိုပါတယ်။ နက်ဖြန်တော့ အသိအမကြီးက ဖိတ်လို့ သူ့အိမ်သွားမှာပါ။ ဒီနှစ်တော့ နှစ်သစ်ကိုကြိုပုံကြိုနည်းအသစ်နဲ့ ကြိုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါမဲ့လည်း တရားထိုင်တဲ့ အလေ့လေးတော့ မပျက်မကွက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ နှစ်သစ်ကို စိတ်နှလုံးရွှင်လန်း သစ်ဆန်းစွာနဲ့ ကြိုခြင်းဟာ အမွန်မြတ်ဆုံးပါပဲ .....
မောင်သက်(ခေတ်လူများ၏ မှတ်စု နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့မှာ နှစ်သစ်က လက်ကမ်းပြီးကြိုဆိုနေပြီ။ သူဆီကို ကျွန်တော်တို့ တွေသွားရတော့မည်။ ဘာတွေ ယူဆောင်သွားကြမလဲ။ အရင်နှစ်တွေက ရရှိခဲ့တဲ့ အသိပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေက နောက်နှစ်အတွက် ဓားနဲ့ ဒိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့ ဓားနဲ့ ဒိုင်း ဖြစ်သွားရတာလဲ။ ဒီလိုပါ။
အသိပညာဆိုတဲ့ ထက်မြတ်လှ ဥာဏ်ရည်နဲ့ ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်ပြီး မာကျောရင့်ကျက်လှတဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ ဒိုင်းနဲ့ ကာကွယ်ရင်း အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားလို့ ရှေ့သို့တက်လှမ်းသွားကြရမှာပါ။ ဒီတော့ သင်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် စွမ်းအားတွေ အပြည့်ရှိသည်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အားလုံးကို ပြောပါမယ်။ ရိုးသားပါ၊ ကြိုးစားပါ၊ သတ္တိရှိပါ။
ထွဋ်ကိုကို - http://co2discovery.blogspot.com/
အဟောင်းတွေ ကို အကုန်ထားခဲ့ချင်ပါဘီ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ၂၀၁၁ နှုတ်ဆက်ပွဲကြီးက အရမ်းပြင်းထန်လွန်းတ၇်ဗျာ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် က ပေါက်ကွဲသံကြီးအတိုင်း သတ္တာဝါတစ်ကောင်ရဲ့ အော်မြည်သံဆိုရင်တောင် နောက်ဆုံးထွက်သက် အတိုင်း အော်ဟစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါစေ။ နောင်လာမဲ့ ၂၀၁၂ ရဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နေ့သစ်တွေမှာ မင်္ဂလာ သစ်တွေနဲ့ပဲ ပြည့်စုံ နေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ..... Welcome To Happy New Year 2012
လင်းနစ် - China
နှစ်သစ်မှာ မည်သူမဆို စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အတူ အောင်မြင်ခြင်းများတပွေ့တပိုက်ကြီးရနိုင်ပါစေ...။ ဒီနှစ်သစ် လေးမှာတော့ ထွေထွေထူးထူးဖြတ်သန်းစရာ လမ်းခရီးက နှောင်းနှေးနေတာမို့ နှစ်ဟောင်းက စိတ်ညစ်စရာတွေ အကုန်မေ့ထားပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
အလင်းသစ် - http://alinthit.co.cc/
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ စိတ်အတွေးတွေ ထဲကနေ ၂၀၁၁ ကတော့ ရိုင်းစိုင်းစွာ၊ ကြမ်းတမ်းစွာ ခပ်ပြင်းပြင်းကြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါပြီ။။ မကြားချင်တဲ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သတင်းစကားတွေ ကြားခဲ့ရတယ်။။ မမြင်၊မတွေ့ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်းတွေကို ရွံ့ကြောက်၊ သွေးပျက်ဖွယ် မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒါတွေကြားရ၊ မြင်ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွဲပြီး၊ မဖြစ်စလောက် အကူအညီလေးတွေ လှမ်းပေးရုံက လွဲပြီး ဘာဆိုဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။။ တကယ်ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ပေးနိုင်တဲ့ နှစ်သိမ့်ဖေးမမှု ဆိုတာ ဘယ်လောက်များ ထိရောက်နိုင်ပါ့မလဲ တွေးကြည့်တော့ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။။ ဒါကြောင့် ဒီ ၂၀၁၁ ဆိုတာကြီးကို မြန်မြန်ကုန်ဆုံး စေချင်ခဲ့ပါတယ်။။ တော်တော်လည်း ခါးသီးမိပါတယ်။။
ဒါကြောင့်မို့ ၂၀၁၂ ကို မြန်မြန် ကြိုဆိုချင်မိပါတယ်။။ ဒါပေမယ့် မရဲတရဲပါပဲ။။ ကုန်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၁ လို အခြေအနေဆိုးအချို့ ထပ်မဖြစ်ဖို့ကိုတော့ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲကို ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။။ နှစ်သစ်ကို ကြိုတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတာကတော့ သာမာန်ပါပဲ။။ ညကြီးသန်းခေါင် ထပြီး အော်ဟစ်ကြိုဆိုတာကိုလည်း ဝါသနာမပါပါဘူး။ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ကူးည ရင်ခုန်သံဆိုတာ ကျွန်တော့်ဆီမှာ မရှိပါဘူး။။ နှစ်သစ်မှာ အလိုလားဆုံးသော၊ အဖြစ်ချင်ဆုံးသော ဆန္ဒတစ်ခုကတော့ အမိမြန်မာပြည်ကနေ ဆိုးဆိုးရွားရွား စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းစကားတွေ ထပ်မကြားပါရစေနဲ့ ဆိုတာလေးပါပဲ။။ ဒိထက်ပိုပြီး ဘာမှဆုလည်း မတောင်းချင်တော့ပါဘူး။။ ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေတဲ့ တချို့သော အခက်အခဲဆိုတာတွေက သူတို့၊သူတို့တွေ ကြုံခဲ့တာနဲ့ ယှဉ်ရင် မပြောပလောက်တာတွေမို့ ဒီဆုကိုပဲတောင်းပါတော့မယ်။။
ကိုဒီသွေး - www.9dblood.co.cc
၂၀၁၂ နှစ်သစ်ဟာ ထူးခြားတဲ့ နိမိတ်ပုံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး လူတိုင်းအတွက် စိတ်ဓါတ်နဲ့ခွန်အားကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေအနေနဲ့ အစိုးရသစ်၊ အတွေးအခေါ်အသစ်၊ ခွန်အားအသစ်တွေနဲ့ ၂၀၁၂ရဲ့ မနက်ဖြန်များစွာထဲမှာ သာယာ ပျော်ရွှင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
မောင်ငြိမ်းချမ်းကို - http://nyeinchanko.blogspot.com/
နှစ်ဟောင်းက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ အခုလိုနှစ်သစ်မှာ နှစ်ဟောင်းက အဖြစ်အပျက်မျိုးမဖြစ်စေပဲ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ ပြည်သူတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ဘ၀ကို လျှောက် လှမ်းမယ်ဗျာ ...
ရဲကို - www.chocolatecupidlay.com
နှစ်သစ် အမှတ်တရ ဆိုရင်တော့ မနှစ်ကနယူရီးယားမှာ ဘိုင်ကျနေလို့ တိုက်ခန်းဘေးက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လုပ်တဲ့ ဘုရားပွဲမှာပဲ ဇာတ်ပွဲကြည့်ပြီးဖြတ်သန်းခဲ့တယ်..:P ဒီနှစ်တော့ အခန်းမှာ ရိုးရိုးလေးပဲအခန်းဖော်တွေနဲ့ စားစရာ တစ်ခုခု ချက်စားပြီးတော့ဖြတ်သန်းမှာပါ။ (သောက်တာ လဲပါပါတယ်..:P..စားချင်ရင်လာခဲ့ကြနော့)
အောင်မိုးသူ (စူးရှ) - www.aungmoethu.blogspot.com
ကျွန်တော့်အတွက် ကတော့ နှစ်သစ်မှာ အမှတ်တရ သိပ်မရှိဖူးဘူး... အရင်တုန်းကတော့ အိပ်တာများတယ် ခုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စားသောက်ပြီးကြိုဆိုမယ်ပေါ့... လူငယ်ဆိုတော့.... ဘလော့ကာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုပေမယ့်... ဘလော့ကာ သက်တမ်း ကနုသေးတယ် ဒီတော့ လူငယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ လွတ်လွတ် လပ်လပ်နဲ့ ကြိုဆိုမယ်။ ဒီလောက်ပါ.... နှစ်သစ် ဆိုတာထက် ဒါက အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန် အရလေ မြန်မာ အယူအဆနဲ့ဆိုတော့ နှစ်သစ်က တန်ခူးမှပေါ့ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကို ပိုနှစ်သက်တယ်........ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတာက အများသုံး ပြက္ခဒိန်ဆိုတော့လည်း နယူးရီးယားဆိုတာ အကျုံးဝင်တာပေါ့... ဒီတော့လည်း..... ပျော်ပျော်လေးပဲ နှစ်သစ်ကို အရိုးသားဆုံးကြိုဆိုတာ ကောင်းပါတယ် အားလုံး ပျော်ရွှင်သော 2012ဖြစ်ပါစေ .....
Mc wai yan (Dannel Iglesias Phyo) - http://mcwaiyan.blogspot.com
နှစ်သစ်မှာ လုပ်စရာတွေ ကတော့ အများကြီးပဲ လုပ်ချင်တာတွေ နှစ်သစ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းမယ်။ အသက်လဲ တစ်နှစ်ကြီးလာပြီ ဆိုတော့ နောက်ပြီး 2012 နှစ်ဟာ ကမ္ဘာ ပျက်မယ်လို့ ပြောပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ကြောက်တယ် ဂျ။ လူငယ်ဆိုတော့ ယုံတော့မယုံပါဘူး အမတစ်ယောက်ပြောတာတော့ ဖတ်ဖူးတယ် မနေ့ တုန်းက အခု 2012 မှာ လူတွေ အားလုံးတိုးတတ်ကြီးပွားမယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ နေရာတော်တော်များများ မှာတော့ ငလျင်တို့မီးလောင် တာတို့ေ၇ကြီးတာမျိူးတွေ ဖြစ်မယ်လို့ ကျောတယ် ဒီလောက်ပါပဲ ....
အချစ်ဆုံးကိုဖက် အမြင့်ဆုံးကိုတက်ပြီး Happy New Year လိုအော်လိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာ ....
ကိုစက္ကဝါဆာန် - http://jakkawachan.blogspot.com/
နှစ်သစ်မှာ ဘလော့ဂ်ဂါ ပေါက်စလေးတွေ များများ ပေါက်ပွားလာပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်ဗျာ ပြီးတော့ နည်းပညာ တွေမျှဝေပေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ ညီအကိုအားလုံးကိုလည်းလေးစားပါတယ် အဲ အသည်းလေး မကွဲအောင်တော့ နှစ်သစ်မှာ ဘလော့ဂါများ ကျည်ကာ ဝတ်သင့်ကြောင်း ဟိဟိ ငါ့ညီလို အားနာ တတ်တဲ့လူတွေပေါ့ ....
နှစ်သစ်လေးမှာ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝ ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ခင်ဗျာ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ .....